Olee otú adịgide adịgide Doro Anya Nchọgharị History site na iPhone 2
Olee otú adịgide adịgide Doro Anya Nchọgharị History site na iPhone
Gịnị mere ekpocha nchọgharị akụkọ ihe mere mgbe nile dị mkpa?
Onye ọ bụla maara na ọ dị mkpa iji kpochapụ ihe nchọgharị akụkọ ihe mere na a mgbe niile ma e nwere nanị ole na ole bụ ndị maara ihe mere o ji dị mkpa. N'okpuru bụ ụfọdụ ihe na-akọwa ihe mere unu ga-edebe ekpocha na nchọgharị akụkọ ihe mere gị iPhone:
Wepụ stale Records - Oge ọ bụla ị gara na a page, ya ọmụma na-echekwara na n'ụdị kuki. Ọ bụ ezie na ihe ndị ahụ dị na-ebibi onwe na-akpaghị aka na-ehichapụ ozugbo ọ esịmde ya ngafe oge, mgbe ụfọdụ, ihe ọmụma na-anọgide n'ebe ahụ ma na ọ bụrụ na gara na saịtị ahụ na mgbe nile emelitere, ya stale ndekọ ga na-ị si na na saịtị ahụ. Ikpochapụ kuki tinyere nchọgharị akụkọ ihe mere magbuo iPhone ịchọ na rịọrọ peeji dị ka ma ọ bụrụ na ọ bụ nke mbụ ya na a na-achọgharị, ya mere ndị ọhụrụ na ọhụrụ ọmụma nke saịtị na-echekwara na ngwaọrụ gị.
Ịnọgide na-enwe Nzuzo - Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na-handover gị iPhone ndị ọzọ, i nwere ike na-achọghị ka ha mara nke weebụsaịtị i gara. Ebe ọ bụ na saịtị na ị gara na-echekwara na na History ngalaba nke gị iPhone, ekpocha na nchọgharị akụkọ ihe mere na-egbochi ndị ọzọ si n'ịkpọ na mbụ meghere peeji nke gị iPhone.
Mma Performance - na ọtụtụ ndia echekwara na nchọgharị akụkọ ihe mere, gị iPhone-aghọ umengwụ na-eme ka ị nọgide na iji ngwaọrụ gị flawlessly. Ikpochapụ na nchọgharị akụkọ ihe mere na-eme ka elu a bukwanu ego nke disk ohere nke ekwentị gị, ma si otú ya ịrụ ọrụ na-amụba.
Olee otú ikpochapụ iPhone nchọgharị akụkọ ihe mere eme na aka
Iji mee ka ihe dị mfe maka ọrụ, iOS-enye gị ohere ikpochapụ nchọgharị akụkọ ihe mere gị iPhone aka. Usoro a na-adịghị achọ ihe ọ bụla free ma ọ bụ ụgwọ-atọ ndị ọzọ na-eji ngwa na-arụnyere na ekwentị gị na i nwere ike inwe ọrụ mere iji ya wuru na-nhọrọ onwe ya.
Ikpochapụ gị iPhone nchọgharị akụkọ ihe mere eme na aka, ị pụrụ ịgbaso nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka nyere n'okpuru:
Cheta na: Ọ na-chere na ị na-eji nanị Safari ka ịnweta web. Ọ bụrụ na e nwere ihe ọzọ nchọgharị weebụ arụnyere na gị na iPhone na ị na-eji ya maka web Farisii, ị ga-eji na ezi usoro ọcha ya akụkọ ihe mere eme.
Ike na gị iPhone.
Site na Ihuenyo, ịchọta na pịa Ntọala.
Site Ntọala window, enweta Safari.
Ozugbo Safari window emepe, ịchọta na enweta Doro Anya History na weebụsaịtị Data.
Site popup igbe na-abịa, enweta Doro Anya History na Data iji kpochapụ ihe nchọgharị akụkọ ihe mere gị iPhone.
Olee otú ihichapụ kpam kpam nchọgharị akụkọ ihe mere site na iPhone
Ọ bụ ezie na n'elu usoro-enye gị ohere ikpochapụ gị iPhone si nchọgharị akụkọ ihe mere na-enweghị ịdabere na ọ bụla atọ ọzọ ngwa, usoro bụ ogologo na-adịghị ihichapu data-adịgide adịgide. The data ehichapu na iji n'elu usoro nwere ike Ewepụtara eji ihe ọ bụla siri ike data mgbake ngwá ọrụ. Nke a na-eme ka gị iPhone na ya data ngwangwa, karịsịa mgbe ekwentị gị na-eji maka ụlọọrụ mkpa na nwere ọtụtụ okwuntughe ichebe mwute ozi.
Iji wepụ mwute na onwe data gị iPhone na-adịgide adịgide na-adị mfe, ị ga-eji a dị ike data mbibi omume, na SafeEraser site Wondershare ga-gị mma nzọ na nke a. Wondershare SafeEraser bụghị nanị ọcha nchọgharị akụkọ ihe mere eme nke gị iPhone na deletes data na-adịgide adịgide, ọ na-enye gị ohere igosi ọtụtụ ndị ọzọ na iPhone njikarịcha aga-eme na-agaghị ekwe omume ma ọ bụghị.
Ị pụrụ ịgbaso nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka nyere n'okpuru na-adịgide adịgide na ikpochapụ nchọgharị gị iPhone iji Wondershare SafeEraser:
Jiri n'elu njikọ ibudata Wondershare SafeEraser dị ka gị na kọmputa.
Mgbe nbudata, na-eji mgbe usoro iji wụnye ihe omume.
Ozugbo arụnyere, ẹkedori Wodnershare SafeEraser site abụọ-ịpị ya akara ngosi.
Chere ruo mgbe Wondershare SafeEraser installs achọrọ ọkwọ ụgbọala dị ka kwa gị iPhone. (-Adị njikere inye nkwenye gị na ihe ọ bụla nkwenye igbe (es) na-egosi maka echichi.) Mgbe kpaliri n'ihi na, jikọọ gị iPhone na kọmputa na iji data USB na bịara tinyere na ya.
Ozugbo na isi ihuenyo, pịa ihichapu Private Data button (na-anọchite anya ihe na akara ngosi nke a SIM kaadị).
Na-esote window, chere ruo mgbe Wondershare SafeEraser enyocha kwa na-achọpụta rụọ onwe ozi na ike ga-ehichapụ gị iPhone.
Ozugbo mere, lelee na Safari History checkbox site n'aka ekpe ebi ndụ.
Optionally, ị nwekwara ike ịlele Safari Cache na Safari Cookies checkboxes ikpochapụ ha nakwa n'ihi na mma ịrụ ọrụ.
Pịa ihichapu Ugbu a bọtịnụ mgbe mere, na mgbe kpaliri, nye nkwenye gị ịnọgide na-nchọgharị akụkọ ihe mere ihicha usoro.
Ndị ọzọ Wondershare SafeEraser isi atụmatụ
Dị ka e kwuru n'elu, Wondershare SafeEraser nwere ọtụtụ ndị ọzọ na-ewu na-ngwaọrụ ebuli gị iPhone ịrụ ọrụ. A ole na ole n'ime ha na-eji nkenke oge tụlere n'okpuru:
Ihichapu All Data - Nke a na atụmatụ-enyere gị aka doro anya niile data gị iPhone ma mee ka ọ dị ka onye ọhụrụ. Ị nwere ike iji nke a mma mgbe ị chọrọ na-ere gị iPhone ma ọ bụ ọ na-aghọ umengwụ.
Ihichapu ehichapụ faịlụ - Nke a na atụmatụ na-adịgide adịgide-ebibi niile ama ehichapụ faịlụ. Mgbe ehichapụ faịlụ na-ehichapu iji ihichapu ehichapụ faịlụ, ha na-aghọ unrecoverable ọbụna mgbe a ike data mgbake ngwá ọrụ na-eji.
Space nchekwa - Nke a wuru na-ngwá ọrụ-enye gị ohere mpikota onu zọpụta oyiyi na gị iPhone ka onwe a bukwanu ego nke ya ohere nchekwa.
1-Pịa nzacha na mkpocha - Nke a mma-enye gị ọcha niile junk faịlụ, nwa oge faịlụ, na ejibeghi ngwa site gị iPhone. Site n'ime otú ahụ, arụmọrụ nke iPhone nwere ike mụbara.
Ikpochapụ nchọgharị akụkọ ihe mere eme na gị iPhone dị mkpa, ya mere ọ na-atụ aro iji ihe oru oma ngwá ọrụ iji nweta ọrụ mere. Wondershare SafeEraser bụ kpọmkwem e na mepụtara na-ejere nzube ọma.
Olee otú Ihichapu Cell Phone Data
Kwesịrị-Dos Tupu ere Your iPhone
Olee otú Kọwaa Autofill on iPhone
15 ngwa Doro Anya iPhone Ndi ana-akpo
> Resource> ihichapu> Olee otú iji adịgide adịgide Doro Anya Nchọgharị History site na iPhone